Soomaaliya halkay kaga jirtaa liiska dalalka Afrika awooda ahaan? | Aftahan News
Soomaaliya halkay kaga jirtaa liiska dalalka Afrika awooda ahaan?
Muqdisho (Aftahannews)- Wargeyska ka faallooda awoodaha milatari ee dalalka caalamka “Golobal Firepower ayaa sanadkan 2021-ka soo saaray liis uu ku xusay sida ay waddamada u kala awood badan yihiin, si gaar ahna qaaradda Afrika ayuu kasoo xushay 35 waddan.
Sidii badanaaba ay hore u ahaan jirtay, Soomaaliya ma aha dalka ugu hooseeya liiskaas, inkastoo ayn ka muuqanin kaalmaha ugu wanaagsan.
Inkastoo ay jiraan dalal ay awoodda militariga aad isugu dhawyihiin, farqi sidaas u weynna aanu u dhaxeynin – sida Sierra Leone, Gabon iyo Afrikada Dhexe, haddana waddanka ku yaalla cidhifka ugu dambeeya ee geeska Afrika, Soomalaiya, ayaa ku jirta kaalinta 34-aad.
Hase yeeshee, waxaa xusid mudan in la sheegay 35 waddan oo kaliya, halka dalalka Afrika ay ka badan yihiin 50 waddan. Taasi micnaheeda waa in dalalka aan liiska lagu soo darin ayna militari ahaan u dhisneyn.
Soomaaliya waxay kaalinta 136-aad kaga jirtaa liiska lagu qiimeeyay awoodaha milatari ee waddamada, oo ka kooban 138 dal.
Taasi waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya ayna lahayn ciidan kuwa cirka ah iyo diyaarado toona.
Soomaaliya ma laha Maraakiibta diyaaradaha qaada, kuwa wax burburiya, maraakiibta dagaalka ka yar kuwa wax burbirya, kuwa biyaha hoostooda muquurta, kuwa ilaaliya maraakiibta kale iyo waliba maraakiibta miinooyinka baadha.
XIGASHADA SAWIRKA,TELEFISHINKA QARANKA SOOMAALIYEED